नजिक न्युज | हरेकको शरीर आफैमा सुन्दर छ
म यसलाई कसरी अभ्यस्त बनाउन सक्छु ? विशेषज्ञहरूको यसबारेमा कस्तो धारणा छ ? इरीन भन्छिन् ‘तपाई आफैले यसको अभ्यास सुरु गर्नुहोस् । यसको उत्तम तरिका आफैँसँग कुरा गर्नु र यसलाई व्यवहारमा उतार्नु हो ।
सोमबार ०५, असोज २०७७ ०७:३८ मा प्रकाशित